मात्र २५ रुपैयाँमा पेटभर खाना ! - Sabaithari.com
मात्र २५ रुपैयाँमा पेटभर खाना! भन्ने सुन्दा तपाई हामी जो कोहीलाई पनि पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, यो सत्य हो । भैरहवामा एक व्यवसायीले २५ रुपैयाँमा पेटभरी खाना खुवाउन थालेका छन् । भैरहवाका व्यवसायी रविकुमार रौनियारले आफ्नी स्वर्गीय आमा मायादेवीको च्यारिटेबल फाउण्डेसनअन्तर्गतको ‘अन्नपूर्ण भोजनालय’ मार्फत खाना खुवाउने जमर्को गरेका हुन् ।